Saldhig laga qorsheynayo xoreynta Jubada Dhexe oo laga furayo Baardheere+sawirro – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Saldhig laga qorsheynayo xoreynta Jubada Dhexe oo laga furayo Baardheere+sawirro
Gedo(SONNA) Taliska Guutada 10aad ee Ciidamada Xooga Dalka ee Gobalka ee Gedo ayaa sheegay in Magaalada Baardheere ee Gobalka Gedo laga furayo Taliska laga qorshaynayo dib u xoreynta Gobalka Jubada Dhexe ee ay gacanta ku hayaan Nabadiidka.
Taliyaha Taliska Guutada 10aad ee Ciidamada Xoogga Dalka ee Gobalka Gedo Gaasaanle Sare Maxamed Cadow Cali(Sanka) iyo xubno uu hoggaaminayo oo maanta gaaray halkaasi sheegay in Magaalada Baardheere ee Gobalka Gedo laga furayo saldhig laga qorshaynayo dib u xoreynta Gobalka Jubada Dhexe ee ay gacanta ku hayaan Nabadiidka.
Waxaa ku soo dhaweeyey garoonka Diyaaradaha magaaladaasi Baardheere Maamulka degmadaasi iyo Saraakiisha Ciidanka Xooga Dalka ee ku sugan magaalada Baardheere ee gobolka Gedo.
“Aniga booaqaashadeyda waxaa uu qeyb ka yahay dardargelinta howlgalada socda,qorshaheyna ayaa wuxuu yahay in aan aas aasno saldhigweyn oo loogu talagalay in laga qorsheeyo howlgalkiia maleeshiyada Ashabaab looga qabsan lahaa guud ahaan Gobada Dhexe”. Ayuu yiri Taliye Maxamed Cadow Cali(Sanka)
Goblada Jubooyinka iyo Gedo waxaa ka soconaya howlgalo ballaaran oo koxda Shabaab looga xoreynayo deegaanadaasi,si lamid ah howlgalada ka socda gobolada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.